Wararka Tram, mashruuca taraamka, khariidadaha taraamka iyo dariiqyada, jadwalka taraamka iyo joogsiyada
Gaadiidka Old iyo Tram ee Konya, Jarmalka waxaa loo isticmaalaa bar.
Xaqiiqda ah inay jiraan 20 taraam oo qaada rakaabka safarka 60-km ee u dhexeeya Alaaddin iyo Jaamacadda Selçuk ee Konya kama soo dhacaya ajandaha. Tareenkaasi waxaa soo saaray shirkadda Jarmalka “Siemens Ag,. [More ...]
Weerarku ma dhamaanin Jarmalka, kii ugu horreeyey ee weerarradu wuxuu bilaabmayaa maanta sida digniin digniin ah oo ay soo saartay shaqaalaha metro ee Frankfurt, waxaana la soo sheegay in dhammaan taraamka iyo tareenada maalinlaha ah aysan shaqeyn doonin.
Ka dib shaqo joojintii shaqaalaha ka shaqeynayay ajnabiga iyo adeegyada rakaabka ee madaarada Frankfurt iyo Berlin ee Jarmalka, shaqo joojinta darawalada tareenka dhulka ayaa mar kale ka bilaabmay Frankfurt. Madaxa ururka 'Verdi' ee ururka ganacsiga ee Hessen [More ...]
Mashruuca Tramway waxaa ogolaaday guddiga.
Ansixinta DLK kadib, mid ka mid ah seddexda taraam ee ay degmada İzmir u dirtay Dawlada Hoose ee Magaalooyinka Tareenka, Dekadaha iyo Garoomada Diyaaradaha si loo ansixiyo bisha Sebtember 2010, DLH ayaa ogolaatay khadka. [More ...]
Mashruuca Tram Lines Izmir
Üçkuyular - Konak - Alsancak - Halkapınar (Konak) Tram Line ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo maalmahan. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir “Üçkuyular - Konak - Alsancak - Halkapınar (Konak) Tram [More ...]
Adeegyada taraamulka Taksim waxay ku kala duwan yihiin sida ficilku u socdo.
Ma fududa in la ilaaliyo taraamyada ku yaal Jidka Istiklal, oo ah meel laga sooco dadka mudaaharaadaya, dalxiisayaasha iyo ardayda. Mid ka mid ah astaamaha sumcadda magaalada, xilliyada taraamyada si isdaba joog ah ayey isu beddelaan sababtoo ah kooxaha u dhaqdhaqaaqa. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu noqday bini-aadam [More ...]
Darawal alkohol ah oo isticmaalay gaariga Gaziantep wuxuu galay wadada laamiga. Sida ku cad macluumaad la helay, Ertan Ö. (45) oo uu hogaaminayo 27 J 5853 gaadhiga taarikada, darawalka ayaa lumiyay gacan ku haynta isteerinka sababtuna waa Agaasinka Amniga Gobolka. [More ...]
Magaalada Konya, naagtii 68-sano jirka ah waxaa ku dhacay taraam kadibna weyday nolosheeda. Maydkii haweeney da 'weyneyd oo ku hoos jirtay taraamka ayaa laga saaray shaqada dab damiska shaqadooda saacad badhkeed, halka hooyadeed ay si kadis ah ugu gudubtay taraamka dhexdiisa. [More ...]
Muwaadin, si aad u gaarto halka ay ku dhigan tahay gaadiid sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah in loo gaaro, wareejinta dhibcaha, jidadka kale, bixiso qiimaha taraafikada gaadiidka dadweynaha adigoon u bixin inaad wax barto. Sida laga soo xigtay warkii wargeyska fiidkii ee Nebahat Koç [More ...]
Ma dooneyno xargaha kalluunka!
Ayuu leeyahay Madaxweynaha Xisbiga Tepebaşı Ramazan Kaya, isaga oo tixraacaya dhibaatooyinka ka haysta gaadiidka magaalada waa in sida ugu dhakhsaha badan loo xaliyaa, ayuu yidhi. Xusuusnow in taraamku dadka ku adkeeyo inay noloshooda u fududeeyaan [More ...]
Duufaantu waxay ku dhuftey badda!
Turkey ayaa laga soo galo saamayn of roob cusub ka badan Mediterranean Central galay. Roobab mahiigaan ah iyo duufaanno ayaa waxtar u leh xeebaha koonfureed ee Aegean iyo Badda Mediterranean-ka. Iskuulada fasaxa ee Antalya roobka iyo duufaanta awgeed [More ...]
Waxaa laga sameeyey Turkiga nidaamka Tareenka
Turkiga gudahiisa, dhammaan maalgashiga nidaamka tareenka sida tareenka dhulka hoostiisa, tareenka iyo tareenka dhulka hoostiisa, oo ku yaal badhtamaha Ankara, waxaa looga baahan yahay inay noqdaan kuwo gudaha ah qiime ahaan illaa 51%. Aasaasidda warshadaha Konya ayaa abaabulay. Konya [More ...]
Buyuksehir wuxuu isku diyaarinayaa inuu talaabooyin ka qaado EDS oo ka dhan ah shaqada wadada iyo wadooyinka wadada ee ganacsadayaasha dhibicda dhexe ee Istanbul. Codsiga ayaa markii ugu horaysay ka hirgalay wadada Tersane Street ee Karaköy. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, Iftiinka cas iyo amniga [More ...]
Degmada Metropolitan ee Eskisehir 'dhisidda waddo tareen ah oo ka soo jeeda gobolka', dhisidda ilaha ayaa la joojiyay
Masaajidka ugu da'da weyn ee Seljuks ee Eskişehir, Masjidka Alaeddin ee ay dhistay hay'ad samafal ah Şadırvan, CHP waxay la kulantay Dawladda Hoose ee Magaalada. Dawlada Hoose ee Degmada Odunpazarı iyo Agaasinka aasaaska [More ...]
Booliska ayaa baaray ESTRAM.
Booliisku wuxuu baaray ESTRAM amar maxkamadeed. Dukumiintiyada qaarkood iyo diiwaanada kumbuyuutarka ayaa lala wareegey intii lagu jiray baaritaanka. Sheegashada Ar dadka qaar waxay qaataan marinnada naafada waxayna ku qaadaan taraamyada iyo basaska lacag la’aan inkasta oo aysan naafo ahayn engelli [More ...]
« 1 ... 206 207 208 »